Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo : “Nahavita ny asako aho” | NewsMada
Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo : “Nahavita ny asako aho”
Par Taratra sur 14/04/2016
Vita ny famindram-pahefana… Nilaza ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo, fa nahavita ny asany izy.
“Ny tenako izay mandeha, efa nahavita ary nanao ny aiko tsy ho zavatra tamin’ny rehetra nokasaina. Ny vokany, mijery azy isika tsirairay”, hoy ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo Jean, tamin’ny famindram-pahefana teo aminy sy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, teny Mahazoarivo, omaly. Mba ho tsara noho izay ny vokatra entin’ny praiminisitra vaovao eto amin’ny tanindrazana.
Misaotra ny filoham-pirenena, tao anatin’izay 13 volana izay, izy: nosafidina hanatanteraka ny politika ankapoben’ny fanjakana, ary nandray anjara tamin’ny fampandrosoana. Eo koa ireo mpikamban’ny governemanta, ny mpiara-miombon’antoka, ny mpiara-miasa, ny fianakaviana, ary ny vahoaka malagasy… Misy ny asa vita, tao ny tsy vita. Natao amim-pitiavana sy an-kitsim-po avokoa ny asa.
Miarahaba sy nitsodrano ny praiminisitra vaovao hahaleo hahalasa izy. Mba hahafahany mampiasa ny traikefa ho an’ny tanindrazana, hiroborobo sy mandroso ary ho tanteraka ny vinan’ny filoham-pirenena: i Madagasikara mandroso sy miroborobo. Hitondra aim-baovao ho an’ny firenena miaraka amin’ny governemanta tarihiny ny praiminisitra vaovao.
“Malagasy aho, tia tanindrazana, tsy tia mitady adihevitra amin’ny tanindrazako. Tsy misy valin-teny omeko anareo intsony”, hoy ny Praiminisitra teo aloha, tamin’ny mpanao gazety, momba ny fametraham-pialany.
“Atao vaindohan-draharaha ny sosialim-bahoaka”
“Governemantan’ny ady no hajoro”, hoy kosa ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Eo ny ady amin’ny fahantrana. Atao vaindohan-draharaha ary tokony ho hita taratra amin’ny fomba faran’izay haingana ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka. Tokony ho hita amin’ny asa tsirairay ataon’ny governemanta fa miova ny fari-piainan’ny vahoaka, fa izay no andrasany.
Raha mbola tsy mipaka any amin’ny vahoaka ny asa, mbola tsy tratra ny ady amin’ny fahantrana. Eo koa ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny ady amin’ny kolikoly, ny fanaovana tantely afa-drakotra sy ampihimamba ny harem-pirenena…
Ho hita raha tsy poakaty fa ho tanteraka tokoa ny fampanantenana hanarina ny fiainam-bahoaka.